ကုန်ကြမ်း Estrone အမှုန့် (53-16-7) hplc≥99% | AASraw အမျိုးသမီးဟော်မုန်း
/ ထုတ်ကုန်များ / အမျိုးသမီးဟော်မုန်း / Estradiol အမှုန့်စီးရီး / Estrone အမှုန့်
SKU: 53-16-7. Categories: Estradiol အမှုန့်စီးရီး, အမျိုးသမီးဟော်မုန်း
AASraw CGMP စည်းမျဉ်းများနှင့် trackable အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်ကအောက်မှာ Estrone မှုန့်အစုလိုက်အပြုံလိုက်အမိန့် (53-16-7) မှဂရမ်ကနေပေါင်းစပ်နှင့်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်နှငျ့အတူရှိ၏။
Estrone (E1) လည်းကြိုတင်နှင့်သွေးဆုံးပြီးသားအမျိုးသမီးနှစ်ဦးစလုံးနှင့်အမျိုးသားများတွင်သိသိသာသာအီစရိုဂျင်ဟော်မုန်းပံ့ပိုးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာနှလုံးနှင့်ဦးနှောက်အကာအကွယ်ဖြစ်ပါတယ်။ အီစထိုဂျင် estrogen receptor မှ binding အားဖြင့်နို့တိုက်သတ္တဝါများအတွက်အမျိုးသမီးလိင်ဝိသေသလက္ခဏာများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုလှုံ့ဆော်သို့မဟုတ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဟော်မုန်းဖြစ်ပါတယ်။
ကုန်ကြမ်း Estrone အမှုန့် အခြေခံ ဇာတ်ကောင်
အမည်: Estrone အမှုန့်
ပွိုင့်အရည်ပျော်: 254-260 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
ကုန်ကြမ်း Estrone အမှုန့်သုံးစွဲမှုကို
Estrone လည်း E1, oestrone, Folliculin, OESTRONE, Theelin, Estrovarin အဖြစ်ကိုသိနေသည်။
ကုန်ကြမ်း Estrone အမှုန့်အသုံးပြုမှု
Estrone2Mg / ml အသားဖြေရှင်းချက်
Estrone5Mg / ml အသားဖြေရှင်းချက်
Estrone ဒြပ်ပေါင်းများ Powder
ကုန်ကြမ်း Estrone အမှုန့်အပေါ်သတိပေး
Estrone လူသားတစ်ဦးအမြိုးသမီးမြားအတှကျသည်ကင်ဆာဖြစ်စေနိုင်သည်အဖြစ်အကြောင်းမရှိရင်သားကင်ဆာနူးညံ့ကြင်နာမှုသို့မဟုတ်နာကျင်မှု, ပျို့ခြင်း, ခေါင်းကိုက်ခြင်း, သွေးတိုးနှင့်ခြေထောက်ကြွက်တက်ဖြစ်လူသိများသည်။ လူတို့သညျတှငျ, estrone anorexia, ပျို့, အန်ခြင်း, erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုစေလူသိများခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
သွေးဆုံးနေစဉ်အတွင်းထုတ်လုပ်အီစရိုဂျင်၏အဓိကပုံစံ။ သင့်ရဲ့အသည်းနဲ့အဆီဆဲလ်တွေထဲမှာအဓိကအားဖြင့်ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ ထိုကဲ့သို့သောတိုက်ရိုက်ဟော်မုန်းပမာဏကိုထိခိုက်နိုင်ကြောင်း xenoestrogens, လေးလံသောဒြပ်စင်များနှင့်အခြားညစ်ညမ်းအဖြစ်အဆိပ်သင့်ရဲ့အသည်းနဲ့အဆီဆဲလ်တွေထဲမှာသိမ်းထားပါတယ်ကတည်းကအဆိပ်၏မြင့်မားသောအဆင့်အတန်းနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီ estrone ၏ပုံစံများကိုပြောင်းလဲနှင့်ညစ်ညမ်းပါပြီ။
Estrone ကုန်ကြမ်း Powder
ကုန်ကြမ်း Estrone အမှုန့်စျေးကွက်
AASraw ထံမှ Estrone အမှုန့်ကိုဝယ်ဖို့ကိုဘယ်လို
AASraw ပါးစပ်အသုံးပြုမှုများအတွက်အန္တရာယ်ရှိလိုလားသူကင်ဆာဟော်မုန်းအဖြစ်နှင့် ပတ်သက်. သန့်ရှင်းစင်ကြယ် 99% Estrone ကုန်ကြမ်းအမှုန့်ဖြစ်သည်။
Estrone ကုန်ကြမ်း Powder ချက်ပြုတ်နည်း